समाज Archives - पेटबोली ...!
चैतको अन्तिम साता पूर्वी पहाड (ओखलढुंगा) जाने संयोग पर्‍यो। एकजमानामा काठमाडौंबाट ओखलढुंगाको यात्रा काठमाडौं-कटारी एकदिनको बस यात्रा र दुईदिनको पैदल यात्रा पछि पुगिन्थ्यो। अहिले समय फेरिएको छ अर्थात् विकास भएको छ। काठमाडौंबाट बिहान बस चढेपछि बेलुकी ओखलढुंगा पुगिन्छ बिपी राजमार्ग हुँदै। मेरो गाउँ मलाई अहिले कर्णालीका बारेमा	Tweet
विकासे बहस र हाम्रो वास्तविक चरित्र
हिजो मंगलबार बिहान अफिस जान सुकेधाराबाट माइक्रोबस चढें। बसका चालक दाइलाई राजनीतिबाट हुनसम्म वितृष्णा भएको रहेछ। उनी ‘नेताहरूले देश बिगारे, कर्मचारीहरू काम नै गर्दैनन्, सबका सब भ्रष्ट छन्’ भनेर उनका सहयोगीसँग र यात्रुहरूसँग एकोहोरो विलाप गरिरहेका थिए। माइक्रोबस एअरपोर्टबाट अगाडि बढ्नेबित्तिकै ट्राफिकको चेकिङ् चलिरहेको थियो। यहाँ सँधै	Tweet
भाडा कति हो हजुर !
काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नेहरू सबैका आफ्ना कथा छन्, आफ्नै व्यथा छन्। आफ्नै सवारी हुनेका पनि होलान् कथा त। तर आफूलाई त्यसको अनुभव छैन क्यारे ! जे भएपनि आफ्नै सवारी हुनेलाई सार्वजनिक सवारी चढनेहरूलाईभन्दा सुखै हुन्छ। आफ्नो सवारी हुनेको तेल खर्चभन्दा सार्वजनिक सवारी चढनेको कम खर्च हुन्छ भन्ने	Tweet
‘खराब करेवालाको हुराठ परी’
‘सब बढिया लागत तो का कही’, मंगलबार दिउँसो अन्नपुर्ण पोस्टको कार्यालयमा काठमाडौं राम्रो मात्रै होइन, के राम्रो, कस्तो राम्रो लाग्यो भन्ने प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याएपछि ९० बर्षिय शारिरीक रूपमा कमजोर मास्टर नाउले भने।	Tweet
भोक युद्ध !
सफलता सायद अभावमै जन्मिन्छ । भोकले नै सायद रचनात्मक बनाउँछ । जीवनलाई फर्केर हेर्दा याद आउँछ– त्यही चुहिएको घरको छानो, माटोको भुईंमा ओछ्याएको एउटा परालको गुन्द्री, ओढ्नलाई आमाको फाटेको सारी । नांगो शरीरमा गुन्द्रीको डाम छाम्दै रूँदा आमाले गाली गरेको कर्कश आवाज ! ***	Tweet
‘मेचीभन्दा उथ देश नाइँ’
पशुपति वृद्धाश्रमको कम्पाउन्डबाट छिरेपछि मुख्य ढोका आउँछ। ढोका बाहिर वारपारै फैलिएको पेटी छ। ढोकैको छेउमा दाहिनेपट्टि दाउरा थुपारिएको छ। पेटीभरि एक्लै, दुईजना गरेर छरपस्ट वृद्धवृद्धाहरू आफ्नै गफमा मस्त छन्। ‘कुन देशका हउ?’ सेतो टिसर्टमाथि कालो इस्टकोट, जाडोमा भित्र लगाउने कालै ट्राउजर र हवाई चप्पल। उनको छेउमा बाहिरपट्टि	12	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला